Sida laga soo xigtay garsoore, Apple kama hor istaagi karto shirkadda 'Swatch' inay diiwaangeliso "Hal Wax Ka Badan" | Waxaan ka socdaa mac
Sida uu sheegay garsoore, Apple kama hor istaagi karto shirkadda 'Swatch' inay diiwaangeliso "Hal Wax Ka Badan"
Weedha ah "Hal Wax Ka Badan" ayaa had iyo jeer lala xiriiriyaa Apple, oo ah weedh uu had iyo jeer ku dhawaaqo markii lahaa wax gaar ah gacmaha dhexdooda si loogu soo bandhigo dhacdooyinka dhaca sanadka oo dhan. Si kastaba ha noqotee, waxay u muuqataa in sida uu qabo garsooraha London, Apple aysan ka hor istaagi karin sameeyaha Swatch inuu diiwaangaliyo.
Dhammaantood waxay dib u bilaabanayaan 2015, goorma Swatch ayaa duubay weedha quraafaadka ah. Sida laga soo xigtay garsooraha, Iain Purvis, baaritaanka wuxuu si fiican u noqon karaa isku day ay shirkaddu ku doonayso inay kaga xanaajiso Apple, laakiin taasi macnaheedu maaha inaysan sharci ahayn. Purvis wuxuu ku raacay sharraxaadda Swatch, taas oo uu ku andacooday in weedha ay soo saartay dambibaaraha telefishanka Colombo.
Wuxuu kaloo xusay in maxkamad horey u jirtay wuu qaldanaa isagoo leh "Ujeeddooyinka 'Swatch' waxay ka gudbeen xadka u dhexeeya isticmaalka sumadda mid habboon iyo mid aan habboonayn." Sida aan ka akhrisan karno Bloomberg:
Waxyaabo Dheeraad ah ayaa yiri Steve Jobs dhamaadka bandhigyo badan oo Apple Inc. ah si loogu dhawaaqo wax soo saar cusub oo lama filaan ah. Laakiin Apple kuma dhegi karto khadka aasaasihiisa, xaakim London ah oo la safnaa shirkadda Swatch Group AG ee Swizer ayaa xukuntay Isniintii muran ganacsi oo muddo dheer socday.
Markii lagu dhawaaqay in Swatch loogu talagalay inay diiwaangeliso Hal Wax Ka Badan, Apple wuxuu sheegay in dhiirigelinta Swatch ay ahayd Parody shirkadda iyo marka laga reebo inay tahay shixnad caqiido xumo ka timid dhinaca shirkadda Switzerland.
In 2017, Apple wuxuu dacweeyay Swatch adeegsiga halkudhigga Tick Kala duwan ee ololaha xayeysiinta cusub ee lagu xayeysiinayo saacad quartz leh 'NFC chip' oo lacag bixin ah, halkudhig uu isdiiwaangaliyay waxyar kadib Hal Wax More
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Sida uu sheegay garsoore, Apple kama hor istaagi karto shirkadda 'Swatch' inay diiwaangeliso "Hal Wax Ka Badan"
Laba iyo tobanka koonfureed waxay soo bandhigaan MagicBridge oo loo kordhiyay si loo mideeyo kiiboodhka sixirka leh nambarada nambarada iyo Trackpad 2
Apple wuxuu shatiyada u siiyaa kumbuyuutar-dawladeed oo adag oo loogu talagalay Macs